BGR - - Tele relay ကတရုတ်ဧရာရေဒီယိုတယ်လီစကုပ်ရုံအာကာသထဲမှာထူးဆန်းတဲ့အချက်ပြကိုကြား
မူလစာမျက်နှာ » သိပ္ပံ ရုံအာကာသထဲမှာထူးဆန်းတဲ့အချက်ပြကိုကြား "တရုတ်ရဲ့ဧရာရေဒီယိုတယ်လီစကုပ် - BGR
ရုံအာကာသထဲမှာထူးဆန်းတဲ့အချက်ပြမှုကြားကတရုတ်ဧရာရေဒီယိုတယ်လီစကုပ် - BGR
တရုတ်အစာရှောင်ခြင်း ဟူ. ခေါ်ဝေါ်ငါးရာမီတာ၎င်း၏အလင်းဆုံတယ်လီစကုပ်ဖွင့်လှစ်တည်ဆောက်ရန်ငါးနှစ်နီးပါး 200 သန်းသုံးစွဲခဲ့သည်။ ဒါဟာဧရာမခံဝန်ခဲ့ပေမယ့်ရလဒ်ကကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်တွင်အကြီးဆုံးပြည့်စုံရေဒီယိုတယ်လီစကုပ်နည်းပညာတစ်ခုအံ့ဩဖြစ်ပါတယ်။ အခုတော့တရုတ်ကပြီးစီးခဲ့စီမံကိန်း၏တစ်တွေနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခြင်းပြန်လည်သုံးသပ်နောက်ပိုင်းတွင်ယခုလအဘို့အဆင်သင့်သည်အတိုင်း, သိပ္ပံပညာရှင်များသူတို့အာကာသသို့ဖြာနေတဲ့နာမည်ဆိုးထူးဆန်းရေဒီယို signal ကို detect ဖို့တယ်လီစကုပ်ကိုအသုံးပြုခဲ့ကြဟုဆိုသည်။
အခြိနျမှနျမှ, ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်ရေဒီယိုအဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းအမည်မသိရင်းမြစ်များမှအားကောင်းတဲ့အချက်ပြ detect ။ ဤရွေ့ကားအစာရှောင်ရဒေီယိုဘက်စ် (အတိုကောက် FRB) မကြာခဏအနည်းကိန်းတောက်သော်လည်း, သူတို့ထဲကအချို့ထင်ရသောကျပန်းကြားကာလမှာထပ်ကျော့မြင်ကြခဲ့ကြသည်။ FRB 121102 အဖြစ်လူသိများတစ်ဦးအထူးသဖြင့်အချက်ပြမှု, အဖန်ဖန်ထင်ရှားပေါ်ထွန်းခံရဖို့မှတ်နှင့်သစ်ကိုတောက်ပတယ်လီစကုပ်တရုတ်နေသည် ကျယ်သောအသံနှင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြားရ၏ .
ဘယ်သူမှတကယ် FRB ဖန်တီးသောအရာကိုအဘယ်သူသိနိုင်နှင့်သိပ္ပံပညာရှင်များမှသူတို့ကိုနိုင်အောင်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်စေသည်ဘယ်အရာကို၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါသူတို့ထဲကအများစုဟာတချွတ်ဖြစ်ကြောင်းတကယ်တော့ပေမယ် 121102 FRB ပြန်လုပ်ပါတူသောကိုအခြားသူများသည်, ပို. ပင်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မောင်းသောဖြစ်စဉ်ကိုမှန်ကန်စေသည်။
"ပြီးတာနဲ့ဒီစာမေးပွဲအတိတ်, Fast ဝဠာရှာဖွေစူးစမ်းများအတွက်တယ်လီစကုပ်ကိုလက်ခံဖြစ်လာသည်။ "Jiang Peng ကမြန်ဆန်၏အကြီးအကဲအင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးကြေညာချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ "မြန်ဧပြီလ 2019 ကတည်းကတရုတ်နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်မှဖွင့်လှစ်သည်။ အမျိုးသားရေးဆောက်လုပ်ရေး၏လက်ခံမှုပြီးနောက်, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိနက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်ပွင့်လင်းကြလိမ့်မည်။ "
အဆိုပါအချက်ပြ၏ "ခွဲထွက်အဖွဲ့အနည်းငယ်သောင်းချီ" ဟုအဆိုပါ FRB 121102 29 သြဂုတ်လကြားနာ၏ညွှန်ပြ Fast ရှာဖွေတွေ့ရှိအချက်ပြမှုများကို အသုံးပြု. သိပ္ပံအဖွဲ့။ ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်အဘယ်သူမျှမကအခြားတယ်လီစကုပ်အစဉ်အဆက်ထိုကဲ့သို့သောအချိန်တိုအတွင်း signal ကို၏အဖြစ်အများအပြားအထပ်ထပ်တွေ့ရှိမိသောကြောင့်ဤသည်အထူးသဖြင့်အဖြစ်အပျက်သစ်ကိုတရုတ်တယ်လီစကုပ်၏မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အာဏာ signal ကို၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုသော့ဖွင့်ကိုကူညီနိုင်မယ်အကြံပြုထားတဲ့, အထူးသဖြင့်သိသာခဲ့ပါတယ်။
Fast သုတေသီများဝေးကွာသော pulsars, ထိုကဲ့သို့သောဟိုက်ဒရိုဂျင်အဖြစ်ဒြပ်စင်များနှင့်များ၏သင်တန်းအမြန်ရေဒီယို burst နောက်ထပ်ရေဒီယိုဖြစ်ခြင်းသုတေသနအတွက်သုံးစွဲဖို့မျှော်လင့်ပြည့်မိမိတို့လက်ကိုရပါလိမ့်မယ်။